news2dago | Mey 2009
[Ankapobeny ] 19 Mey, 2009 10:46
Mizesta no betsaka
Tatanta 4x4 daholo ny mambra ao @ HAT ankehitriny nofinofy izay oe hiaraka ory @ vahoaka izany. Ny fiainana tsy maintsy mba hatsaraina kokoa noho ny teo aloha inona tokoa moa no namonona tena hitolona raha tsy misy tombotsoa kendrena ao.
Toareg no azon'ingahy sareraka @ na miliara ny vidiny ankehitriny satria efa nitotongana ny ariary!!! Tsy misy nomerao moa itony fiara tsy matahon-dalana itony fa soratra mivandravandra be oe "HAT" no hita eo @ ilay takelaka. Jenitra ery ry zalahy mikodidia @ arabe feno lavaka ary angamba ninina tsy tsetsemana intsony ny arabe mba afahan'ny option ny fiara mba miasa.
(Oh izao mihitsy ny fiaran-drizala fa miloko manga fotsiny)
Dia torak'izany ny santionan'ny fiadanana ho an'ireto mpitantana ny tetezamita vonjimaika ireto. Ny capsat moa dia efa mampivonto fo ny mahita azy mandendeha @ minibus vaovao be sy 4x4 maromaro ihany koa matetika dia misarontava ry zalahy tsy sahy miseho vahoaka tokoa sao dia misy mahakobo eo rehefa tsy miasa angamba (mba mianatra ny morsa an'i simplex aloha! lol).
Tsy misy mahalala izay dinidinika natao t@ kadhafi koa moa ny rehetra tsy nisy nanatrika tany fa ny lovatsofina no mba heno @ loaranom-baovao mitongilana t@ fahitalavitra iray eto an-drenivohitra manao oe "manomboka misokatra hono ny fahatokisan'ny any ivelany ny FAT". Nony injay anefa milomano kely @ tranokala dia hita ny vaovao marina fa kay baombina indray ilay resaka vohizina eto Madagasikara.
Etsy andanin'izay dia fadiranovana ny vahoaka tsy mahita izay hatao intsony. Ary matetika tena leo politika tsy misy manaraka vaovao izany intsony ny akamaron'ny olona tsy misy mpijery intsony izany TVM sy Tv+ na Viva izany aleon'ny olona mijery ny Matv sy Otv izay mba hany mamoaka ny vaovao marolafy sy tsy dia miandany loatra @ lafiny iray. Tena leo ny olona ny tena marina vaovao tokana ihany tokoa moa inona intsony no maha vaovao azy. Lasa fandokafana be fahatany ny Fat ny vaovao ao @ TVM sy ny viva. Dia gaga koa ary aho fa saika mba hamatrapatratra tao @ forum ny madagate.com ny tsy fahatoavako an'ity FAT FAT ity indrisy fa nesoriny ny forum e! Izany no midika fa tsy mahatanty kianina ry zalahy ireto fa mahay manakiana sy manasoketa ny hafa fotsiny anefa.
Mbola tsy fantatra izay zavatra hitranga rahampitso tsy misy mahalala afa tsy ny any ambony ihany. Maro be anefa ireo mailaka voaray mampioro-koditra ny ankamarony raha sanatria ka tena tonga tokoa ny tokoa. Mivavaka mafy mba tsy ho tanteraka io asa ratsy handriampahana foko eto madagasikara io. Mino aho fa mety efa nisy nahazo an'io koa ny maro amintsika angamba.